End romwedzi, mushakabvu pamusoro nepachinko yaiitirwa yacho inoti (kupora nguva kana akazaruka-upenyu)
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ End romwedzi, mushakabvu pamusoro nepachinko yaiitirwa yacho inoti (kupora nguva kana akazaruka-upenyu)
※ inongova mugumo
nepachinko yokumusoro Ndapota anotaura somunhu kuitika yose indasitiri, ndinofunga ndivo vamwe vanhu vakanga Makanzwa norunyerekupe kuti kwete kunze. Kutaura zvazviri, ndizvozvo. Mugumo nepachinko yaiitirwa iri, mu dzakawanda zvakachengetwa, tapota funga kuti yavaipora nguva. Kurutivi dzemabhizimisi urongwa yakajeka, zvakaita nguva yokupedzisira kuchinja. (Zviri kana pafiripi divi kuti, kana iwe hauna kuita bhora zvikuru kubva kusunungurwa kusvikira nguva ino, panewo nyaya kuti ipfupi.) _ X000D_ akadai
Xintai yokutsiva uye kushambadzira mari kuti chiitiko rakaitirwa ndiko, sezvo mari kubva pakutanga mwedzi mari vasarudzirwa.
Xintai yokutsiva kuri kukonzera kuguma mwedzi, mari sezvo chakaitika pakutanga romwedzi, kuti mari richauya kunotozongoita kupora anova zvakakodzera. Kana ukaenda maererano plan, handina kunyange dzinofanira akapora kwazvo kunyange kugumisa romwedzi, zvinhu nepachinko chinhu kunyange akafanana kubheja ndiani yakazaruka. Nepo pokuona
data, chikuva pamusoro payout iri kuyerera uye Vagadziri features, pakupedzisira, pachiimbwa yavo ruzivo, nezvimwewo, akarova mbambo, nekuti isu achasarudza yakatarwa, Chokwadi, pamusoro zvisingatarisirwi kana aenda, chokwadi kuti or've akatorwa ane kazhinji munyika.
In Naizvozvo nepachinko yokumusoro, chokupedzisira kuchinja yacho uchishandisa purofiti, kubva kumativi yechi20 mumwe mwedzi, akatanga sungisa mbambo, kana achideredza yokuvira Horukon, kupinda kuzoita wegadziriro. Achitaura sei nguva ino, ndiye yechi25 pamwedzi mubasa voruzhinji, ichava PayDay yenyu. Kana pane muhoro, kana kwete kunze, vatengi ini kudzinga vanhu takunda kupfuura dzose. Kupfuura pakutanga romwedzi kana pakati paNovember, ndiko kuti zvichida kwandiri mari.
Uyezve, chokwadi kuti ini kudzingirira ndiyo zvishoma zvikuru kupfuura dzose, kunyange dai wakaoma ezvinhu ezvipikiri uye zviruva, Sales vari kumusoro, zvichaita kukwanisa kusimudza chakakomba purofiti. Mazuva mashomanana 25 zuva zvakare nokuda Hall, rokutengesa pasina uyewo rakapa ndimhanye neniwo kwakakomba purofiti makamutswawo, zvinova chokuti munguva vanowanzoshanda ndiyewo mumwedzi mumwe.
pakadini Chokwadi kuti kana zviri kuzoita nguva, saka yasvika zvematongerwo kunonoka kubva basa zano nomumwe chitoro, regai kutaura categorically, kana maita wakatora hombe lag shure kubva chakakomba purofiti plan, yavaipora uyewo upamhi, uchava chokwadi kuwedzera.
kuguma mwedzi, nembambo kugadzirisa uye zviruva uyewo, Kana iwe mira yakarebesa uye vakakundikana kunyange zuva rimwe, nokuchiita purofiti chinangwa mumugwagwa aisazoramba kutorwa zvakazara. In zvikuru uchishandisa zano nepachinko yaiitirwa inyika iri Sales, zvose inodhura. iine kwakakomba purofiti.
chete chipikiri kugadziridzwa, kunorevawo kuti akaisa yakatarwa, kana zvichienzaniswa pakutanga mwedzi kana makore, ndiyo upamhi tisingatarisiri inofambidzana kuguma diki mwedzi kubvumirwa. Kunyange zvishoma, kuti yakavimbika akapora, ndiko kuedza kukundikana pasina kuchinja chete, iwe pfungwa mamiriro ezvinhu kuguma management kunhivi.
nokuti, kuva zvose kumira chete mamiriro ezvinhu, ndiwo musoro kuti nguva. Kuna chakakomba kugadziridza inongobata chete inzwi vashoma payout yakanyanya kunaka. Tafura kuti ndizvo zvinoitika chipikiri kuchinja uye Horukon kuisa, pane akanaka. Uyezve, slots, nezvimwewo, kuti kuva nyore kuisa chinja pane zvipikiri kugadziridzwa, zvichiita nyore kuti zvinotarisirwa bhora kunze kufananidzwa nepachinko.
kuguma slots, sezvo tichienzanisa kuti nepachinko, iri mutambo, haufaniri kuwana rubatsiro yako asi akati kuva disadvantageous mamiriro ezvinhu. Mugumo mwedzi kuti kukanganwa chokwadi kuti ndiro kupora nguva, kuongorora chinangwa nechigadziko, zviri nani kutamba pasina ari kuvadzingirira nokurova akawandisa zvakare. Ndicho upamhi tisingatarisiri zvava kuguma diki mwedzi kuva. Kunyange zvishoma, kuti yakavimbika akapora, ndiko kuedza kukundikana pasina kuchinja chete, iwe pfungwa mamiriro ezvinhu kuguma management kunhivi.
kuguma slots, sezvo tichienzanisa kuti nepachinko, iri mutambo, haufaniri kuwana rubatsiro yako asi akati kuva disadvantageous mamiriro ezvinhu. Mugumo mwedzi kuti kukanganwa chokwadi kuti ndiro kupora nguva, kuongorora chinangwa nechigadziko, zviri nani kutamba pasina ari kuvadzingirira nokurova akawandisa zvakare.